प्रकाश तिम्सिना/न्युज कारखाना : सुनसरी, २४ पुस । कुनै समय सीमित कार्यकर्तासँग संगत गर्ने भनेर चिनिएका एमालेका नेता हुन्, भीम आचार्य । सुनसरी एमालेका आचार्य पार्टीका हरेक कार्यक्रम सहभागी हुन्थ्ये । तत्कालीन एमालेमा दुई खेमा माधव नेपाल र केपी शर्मा ओली हुँदा माधव नेपालका सुनसरी मात्रै नभई पूर्वाञ्चलमा उनको दबदबा थियो । तर, आफ्नो शक्ति […]
चितवन, १४ मंसिर । नेकपा एमालेको सचिव पदको प्रतिष्पर्धामा भीम आचार्य र टंक कार्की पराजित भएका छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहमतिका लागि प्रस्ताव गरेको सूचीमा नपरेपछि दुवैले उम्मेदवारी दिएका थिए । आचार्य निवर्तमान सचिव हुन् । उनी प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । कार्की चीनका लागि पूर्वराजदूत हुन् । आचार्य ओलीइतर समूहका […]
प्रदेश १ मा भीम आचार्य मुख्यमन्त्री, पाउलान् विश्वासको मत ?
इटहरी । प्रदेश १ मा भीम आचार्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री शेरधन राईको प्रस्तावमा आचार्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै बिहीबार नै सपथ लिएका छन् । प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ ले आचार्यलाई पद तथा गोपनियताको सपथ गराए । शेरधन राईले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि उनलाई एमाले संसदीय दलको बैठकले संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको […] The post प्रदेश १ मा भीम आचार्य मुख्यमन्त्री, पाउलान् विश्वासको मत ? appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.
प्रदेश नं १ का नव नियुक्त मुख्य मन्त्री भीम आचार्य को हुन ?
प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा भीम आचार्य नियुक्त भएका छन्। शेरधन राईले पदबाट राजीनामा दिएसँगै आचार्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। आज विहान एमाले प्रदेश १ संसदीय दलले आचार्यलाई संसदीय दलको नेतामा...
भीम आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त, प्रदेश प्रमुखसामु लिए शपथ
१ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा भीम आचार्य नियुक्त भएका छन् । आचार्यले प्रदेश प्रमुखसामु शपथ लिएका छन् । यसअघि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा तत्कालै स्वीकृत भएर आचार्यको नियुक्तिसँगै शपथ भएको छ । यसअघि आचार्य प्रदेशसभामा एमाले पार्टी संसदीय दलको नेता चयन भएका थिए ।
प्रदेश १ एमाले संसदीय दलको नेतामा भीम आचार्य
प्रदेश १ एमाले संसदीय दलको नेतामा भीम आचार्य चयन भएका छन् । बिहीबार विराटनगरमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले भीम आचार्यलाई सर्वसम्मतले संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको हो । मुख्यमन्त्री शेरधन...
भीम आचार्य प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बन्दै
नेकपा एमालेका सचिव भीम आचार्य प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बन्ने भएका छन् ।
काठमाडौं, १० भदौ । नेकपा एमालेका सचिव भीम आचार्य प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बन्ने भएका छन् । आजै एमाले संसदीय दलको बैठक बसी भीम आचार्यलाई चयन गरिने भएपछि मुख्यमन्त्री बन्ने भएका हुन् । आचार्यलाई संसदीय दलको नेता बनाउन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रस्ताव गर्ने भएका छन् । त्यसपछि उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिइनेछ । […]
मुख्यमन्त्री बन्न सहयोग माग्दै भीम आचार्य पुगे कोटेश्वर, नेपालले गरे अस्वीकार
‘शनिबार बिहान भीम आचार्य कमरेड यहाँ आउनुभएको थियो’, नेता नेपालका स्वकीय सचिव मोहन गौतमले सेतोपाटीसँग भने, ‘साढे आठ बजेदेखि नौ बजेसम्म उहाँहरूबीच समसामयिक विषयमा छलफल भएको थियो।’